Mabhuku akanakisa eerotic atinogona kukurudzira kwauri | Zvazvino Zvinyorwa
Kwemakore mashoma, kuwedzera kwemabhuku eerotic kwakakura mushure mekubudirira kwemamwe mabhuku enganonyorwa ayo akaita kuti mhando diki diki dzigamuchirwe uye kwete kuvanzika. Muzvitoro zvakawanda zvemabhuku mabhuku akanakisa eerotic akabva paku "vanzwa" kusvika pakuumba musana uye kutengesa kwakawedzera nekuda kwekuverengwa uku.
Hazvinzvengeki tenda novel senge 50 Shades yeGrey nekuti, nekuda kwake, mabhuku eerotic akatanga kubuda uye kuzivikanwa. Nekudaro, isu hatigone kutaura kuti yaive mhando yakatanga nebhuku iri. Iye erotic anga aripo kwenguva yakareba, asi havazi vazhinji vakaisarudzira pakuiverenga. Saka, Nhasi tichaenda kukukurudzira mamwe emabhuku akanakisa eerotic.
1 Chii chinoratidzira mabhuku eerotic
2 Mabhuku akanakisa eerotic
2.1 Makumi mashanu emvuri yegrey
2.2 Nhoroondo yeO
2.4 Ada kana kushinga
2.5 Anoda Mukadzi waChatterley
2.6 Ndibvunze chero chaunoda
Chii chinoratidzira mabhuku eerotic
Mabhuku erotic anogona kunyorwa kubva pamadhigiri akasiyana. Uye kune mutsetse wakanaka pakati penyaya yekudanana uye zvinonyadzisira izvo matinogona kuwana mabhuku eerotic. Mariri, zvinyorwa zvinogona kugadzirisa dingindira repabonde kubva pane "mwenje" muganhu kusvika pamuganhu wezvinonyadzisira kana uchidudzira zviitiko zvepabonde.
Asi chii chaizvo chinoratidza mabhuku anokwezva?
Simbisa chishuwo. Iyo nyaya inofanirwa kuve inoenderana, asi mairi mavara pachawo anofanira kujekesa kuti chishuwo chavanonzwa kune mumwe munhu, kwete chete padanho rerudo, asiwo bonde.
Ivo vanofanirwa kutyora kusarura, kusaremekedza ... Mune mamwe mazwi, ivo vanofanirwa kupfuura kungo tarisa kwerudo, ivo vanofanirwa kutsvaga chishuwo chebonde, chenyama uyezve icho chisingagutsikane kamwe chete.
Ita kuti muverengi afarire. Hazvina kudikanwa kuti mabhuku eerotic ataure zvese zvakadzama, asi kuti vatambe nepfungwa dzemuverengi, zvichiita kuti vakwanise "kunzwa" zviri kusangana nevamiriri kuburikidza nemazwi.
Icho chakavakirwa pahupombwe, kudenha, kufara. Iyi ingangodaro iri kiyi kuitira kuti nhoroondo yerudzi urwu isasvike pabonde, iyo inorondedzera kusangana pabonde asi kubva murudo uye nemanzwiro, kwete zvakanyanya chiito chaicho.
Iye zvino zvawava kuziva zvakati wandei pamusoro pedzidziso inokwezva, zvirokwazvo iwe ungade kuziva kuti ndeapi akanakisa eroottinen mabhuku aripo. Uye kunyangwe zvakadaro hatigone kuzviisa zvese pazasi, Nekuti hatisi kuzoitwa kwenguva yakareba, isu takasarudza sarudzo yavo kuti vakupei mazano.
Ehezve, zvinoenderana nerunako rwemunhu wega wega kuti afarire kana kwete sarudzo kana bhuku racho pacharo.
Yedu yakakurudzirwa ndeiyi:
Makumi mashanu emvuri yegrey
Makumi mashanu Shades e ...
Iri bhuku, rakanyorwa naEl James, rine maonero anopokana. Kune avo vanozvifarira uye nevasingazvifarire. Ndiani anoti zvakanyorwa zvakanaka uye ndiani asingadaro. Asi isu hatina kuiisa pano nekuti tinozviona seicho chaicho chakanakisa, asi nekuti Iye ndiye akavhura zvinyorwa zvemhando, akaigadzirisa uye akaipinza mukutengesa.
Kare, mabhuku eerotic aive akavanzwa uye vakataura zvishoma nezvekuverenga bhuku rehunhu uhwu; zvaiita kunge taboo. Asi nekubudirira kwebhuku rino zvinhu zvachinja, uye zvizhinji zvine chikwereti kwaari.
Kune rimwe divi, hazvigoneke kuramba kuti raive rakatengesa zvakanyanya uye kuti rakasvika kumakona ese epasi, saka harina kushata zvakanyanya kana rikave, kwenguva yakareba, bhuku rakaverengwa kwazvo.
Nhoroondo ye O (MAXI)
Iyi novel na Pauline Reage, rakabudiswa muFrance muna 1954 raive chimurenga chakazara. Kutanga, nekuti panguva iyoyo kunyora nezve madingindira eerotic kwaisave chinhu chakajairwa; asi kana zvaisanganisirawo hunhu hwechikadzi hwakasunungurwa pabonde, kunyangwe zvishoma. Muchokwadi, paive nezvikamu zviviri, izvo zvakaramba zvachose novel uye nevamwe vakazvigamuchira.
Kana iri nyaya, inotaurira hupenyu hwemufananidzo weParis, kana, uyo anowira murudo nemudiwa wake uye mudzidzisi, Rene. Iye ari mune yakasarudzika hukama uye, nekuda kwerudo rwaanonzwa kwaari, anosarudza kupinda mariri uye kuitiswa nenzira dzakasiyana dzekuzviisa pasi. Ehezve, isu takatoyambira iwe kuti yakati simbei, yakawanda kupfuura makumi mashanu emvuri yeGrey.
Iyo Decameron haisi pachayo bhuku, asi asi Nyaya zana kana nyaya pfupi dzakagadzirwa nevakadzi vanomwe nevarume vatatu. Izvo zvakanyorwa muma1800 uye nyaya, dzese dzeserura, dzakazvimiririra, saka unogona kudziverenga zvakasiyana.
Mariri muchawana mavara akasiyana senge kittens, vanachiremba ... Mumwe wevanonyanya kuzivikanwa ndiAlejandrina nemitumbi yake minomwe.
Ada kana kushinga
Ada kana kushinga: 55 ...
De Vladimir Nabokov imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndiLolita, asi zvakare iyi, Ada y el ardor nderimwe remabhuku akanakisa eerotic. Akanyora makore anoda kusvika makumi manomwe uye inotaura nyaya yerudo pakati paAda naVan, vaviri vanodanana vanoita makunakuna.
Zvechokwadi, nyanzvi zhinji dzinozviona seimwe yenyaya dzakanakisa munhoroondo (kunze kwenyaya yainotaura).
Anoda Mukadzi waChatterley
Mudiwa wemukadzi ...
DHLawrence ndiye munyori wenyaya iyi inotaura nyaya yemuchato. Nekuda kwemhedzisiro inosiyiwa kumurume neHondo Yenyika Yekutanga (inomusiya muwiricheya zvachose uye asingakwanise kuita zvepabonde), mukadzi wake anonzwa zvishuwo zvisingadzoreke pabonde. Kusvika panguva ino, anokwanisa kuramba. Kusvika asangana naOliver, muchengeti wemitambo, uye anokundwa nekunakidzwa uye zvepabonde.
Iyo inoverengeka iyo Munguva yake aipa zvakawanda zvekutaura nezvazvo nekuti iye munyori aive anozivikanwa nekufunga kuti kusangana pabonde kwaive kusiri izvo chete, Ivo zvakare vakashanda kuti vazive vatambi zvakanyanya padhuze uye pachezvake (kusanganisira muhupenyu chaihwo).
Ndibvunze zvaunoda kufungidzirwa Megan maxwell, munyori wayo, kuwedzera mukutengesa. Uye chinhu ndechekuti, uyu munyori wechiSpanish (usanyengedzwa nemazita ake ekunyepedzera), kudzamara aburitsa runyorwa irwo akangonyora zverudo (chick lit kana kuScotland), uye akashinga nenyaya ine njodzi. Uye mhedzisiro yacho haina kunge yakaipa, kunyanya tichifunga kuti parizvino vari kuzochinjisa naWarner kune firimu.
Iyo nyaya inotarisana naEric Zimmerman, muzvinabhizinesi anobva kuGerman anofanirwa kuenda kuSpain. Ikoko anosangana naJudith, mushandi anokwezva waanotanga kutamba naye, kufungidzira uye kupa pachena kuzvido zvake zvakavanzika. Ehe, zvakare kubva kuzviisa pasi nekutonga (asi pane imwe nhanho kubva kune apfuura).
Ama, nemunyori Kayla Leiz, ndiye akapesana zvakakwana neavatambi vanopihwa kwatiri mumabhuku enganonyorwa. Uye ndizvozvo pano protagonist haasi iye anozviisa pasi muhukama, asi anotungamira. Shanduko yemabasa anodhonzera kutarisisa kwakawanda uye ayo akakwanisa kurondedzera nenzira inoita seyechokwadi.
Mariri iwe uchasangana nemutongi, kana kusagadzikana, uyo, nekuda kwehukama ne "mobster", anozviwana abatanidzwa zvizere mukuferefeta. Izvi zvinoita kuti mapurisa aoneke pamba pake uye mashereni anobhururuka kune mumwe muongorori uyo, zvishoma zvaanoda, ndezvekuti mukadzi amutonge.
Kutonga, 1. Kusungwa ...
Iri nderimwe remabhuku akanakisa eerotic aunogona kuwana. Mariri iwe uchawana Amery, mukadzi wechidiki ari kuyedza kubvisa bhizinesi rake pasi. Molly anoshanda naye, uyo husiku humwe anotambura nekuba uye akakuvara.
Saka paanopora, iye naAmery vanosarudza kuenda ku dojo kunodzidza kuzvidzivirira. Zvandaisatarisira zvaive Sangana nemurume akakukwezva zvakanyanya, uchipa kusununguka kuzvido uye kuzviisa pasi naye.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku akanakisa eerotic